‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा जाऊँ, विवाद नगरौं’ - UrjaKhabar ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा जाऊँ, विवाद नगरौं’ - UrjaKhabar
‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा जाऊँ, विवाद नगरौं’
काठमाडौं । मोहनकुमार डाँगी २०६५ सालदेखि जलविद्युत् विकासमा संलग्न छन् । अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न निर्वाचनको माहोल तातेको छ । दुई प्यानलमा उमेद्वारी घोषणा गरिएको छ । डाँगीले कृष्ण आचार्य समूहबाट महासचिवमा उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । यही सेरोफेरोमा ऊर्जा खबरले उनीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
इपानको निर्वाचन निकै लागेको छ ?
हो, निर्वाचनले केही तानेको छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले सबैले मान्नुपर्छ । उमेद्वारी घोषणा भइसकेकाले जित्छु भन्ने लागेको छ । जित्छु भनेर नै उमेद्वारी दिने हो । यदि, हारँे नै भने पनि विजयी हुने मेरा प्रतिद्वन्द्वीलाई खादा–माला लगाएर सम्मान गर्छु । कोरोना महामारीका बीच पनि उहाँलाई अंकमाल गरेर शुभकामना दिन्छु । र, भविष्यमा आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग गर्छु । यसकारण, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गरौं । अरू गाईजात्रा नदेखाउँ भन्ने अनुरोध गर्छु ।
यहाँका चुनावी एजेण्डा कस्ता छन् ?
जलविद्युत् व्यवसाय अन्य जस्तो होइन । यसमा लगानी गर्नेले धैर्यता गर्न सक्नुपर्छ । हामी सबैका समस्या साझा छन् । हामी पुग्ने ठाउँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत विकास विभाग नै हो । यसैले, ऊर्जा क्षेत्रमा उठाउनुपर्ने मुद्दा साझा छन् । साथीहरूले प्राथमिकताका आधारमा समस्याको पहल गरिरहनु भएको छ । मैले उठाउनुपर्ने पनि यी भन्दा अलग्गै एजेण्डा पटक्कै छैनन् ।
म २०५७ सालमा स्थापना भएको इपानले अहिलेसम्म केही गरेन भन्नेमा छैन । अघिल्ला पदाधिकारीले समय परिस्थिति अनुसार काम गर्दै आए । इपानको लामो इतिहासमा अहिले आएर हामी मात्रै राम्रो र हामी मात्रै काम गर्छौं भन्नु मुर्खता हुनेछ । अहिलेसम्म कार्यसमितिबाट पास भएर आएकादेखि समय परिस्थिति अनुसार उठ्ने एजेण्डा उठाएर सरकारसमक्ष लबिङ गर्ने कामलाई मैले पनि प्राथमिकतामा राखेको छु ।
जलविद्युत् क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै खराब अवस्थामा छ । उठाउनुपर्ने एजेण्डाको चाङ नै छ । मैले पनि उमेद्वारी घोषणा गर्नु अघि ३२ बुँदे एजेण्डा तयार गरेको थिएँ । तर, ती सबै प्रचारप्रसारमा ल्याउनु उचित हुन्छ जस्तो नलागेर सार्वजनिक गरेका छैन । मलाई ठिक लागेर ल्याएका एजेण्डा समूहमा छलफल गर्दा प्राथमिकतामा परे मात्रै सर्वाजनिक गर्ने हो । तत्कालका लागि चुनावी प्रचार गर्न अलग्गै एजेण्डा छैनन् । अर्को कुरा, इपानमा आवद्ध हामी सबैमा शुद्धिकरण जरुरी ठान्छु । मभित्र पनि खराबी होलान् । म आफूलाई शुद्धिकरण गर्न तयार छु र साथीहरू पनि तयार हुनुपर्छ ।
तपाई वर्तमान कार्यसमितिमा हुनुहुन्न । पहिलो पटकमै महासचिवमा किन उमेद्वारी दिनुभयो ?
म २०६५ सालदेखि जलविद्युत्मा सक्रिय भएर काम गरिरहेको छु । त्यही बेलादेखि म इपानको साधारण सदस्य छु । मेरो अर्को व्यावसाय पनि छ । तर, मैले आफ्नो पूर्ण समय जलविद्युत् विकासमा लगाएको छु । सुरुका केही वर्ष इपानको वार्षिक साधारणसभामा जाने बाहेकको खास भूमिका थिएन ।
मेरो लगानीका दुई आयोजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्यो । त्यो बेला निजी उत्पादकको समस्या राख्ने साझा ठाउँ इपान हो भन्ने लाग्यो । र, न्याय खोज्दै खारेज भएका आयोजना फिर्ता ल्याउन मैले इपान गुहारेँ । मसँगै आयोजना खारेजीमा परेका १४ प्रवर्द्धकले संयुक्तरूपमा निवेदन दियौं । नियमित फलो गर्यौं । तर, खासै पहल हुन सकेन । अब आफैं आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । यसपछि म आफैं यो लडाइँमा उत्रिएँ ।
म अहिले नाम लिन्नँ । त्यतिबेला, इपान कार्यसमितिमा हुने साथीहरूले तपाईंहरूले अख्तियारलाई जितेर आयोजना फिर्ता ल्याएर बनाउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन भनेर चुप लागेर बस्न सुझाव दिनुभएको थियो । तर, हामीले प्रयास गर्न छोडेनौं । अन्ततः मेरो आयोजना फिर्ता ल्याउन सफल भएँ । अहिले एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।
अर्को आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । त्यतिबेला, मलाई परेको अन्यायको अनुभूति अहिलेसम्म भइरहेछ । यस्तै समस्या यो क्षेत्रमा अब पनि आउन सक्छ । मैले विगतमा भोगेको अनुभवका आधारमा त्यस्तै समस्या हुने प्रवद्र्धकको आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । इपानमा लागेर नेता बनौंला भन्ने छैन । आफ्नो क्षमताले भ्याउने गरी यो क्षेत्रमा लाग्नेलाई मर्यादित र सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रणले कृष्ण आचार्य अध्यक्ष भएको प्यानलमा महासचिवमा उमेद्वारी दिएको हुँ ।
अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ । गृहकार्य कस्तो छ ?
विधान संशोधन गर्नुपरेकाले गत माघमै हुनुपर्ने निर्वाचन पछि सर्यो । निर्वाचन हुने दिनमा उजुरी दिएर स्थगित गरियो । यसो बुझ्दा निर्वाचन रोक्ने कार्य दुषित मनासयले भएको देखिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्रोटोकल अनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी भएको थियो । लुकाएर लुक्ने नाम होइन । रोशन बस्नेतजीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन स्थगित गराउन उजुरी दिनुभयो र रोकियो ।
उहाँले कहाँबाट प्रेरित भएर मुद्दा हाल्नुभयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । यति हुँदा–हुँदै निकास त खोजिनुपर्छ । दुवै पक्षलाई मिल्ने गरी सहमतिको आन्तरिक प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो प्यानलले साउन २ गते भेला गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी ९ जना अग्रज सल्लाहकारलाई दिएको छ । उहाँहरूले सहमतिमै कार्यसमिति चयन प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटो खोज्नुहुनेछ । सहमति जुट्न नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूलाई नै दिइएको छ ।
कार्यसमिति चयन प्रक्रियामा आवश्यकभन्दा बढी किचलो हुँदा उठाउनुपर्ने मुद्दा ओझेलमा परे भन्दै तपाईंहरूको आलोचना भइरहेको छ । कमजोरी कहाँ भयो ?
एउटा कार्यकाल सकिएर नयाँ चयन गर्न अघिल्लो कार्यसमितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले नै अहिलेको परिस्थिति आउन नदिन ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर, केही कमजोरी अवश्य भए र अहिले असर देखियो । इपानको सदस्य प्रवर्द्धक कम्पनी हो । व्यक्ति होइन । कम्पनी सदस्य भएपछि कोही न कोही आएर भोट हाल्नुपर्यो । कम्पनी आफैंले भोट हाल्ने कुरा भएन । इपान स्थापनादेखि गत माघ २४ गतेसम्म प्रोक्सीमा हामीलाई हस्ताक्षर गराइन्थ्यो । हामीले गरिराख्यौं । यो गल्ती मबाटै पनि भयो । अरूलाई मात्र दोष लगाउन चाहान्नँ ।
प्रोक्सी खारेजीको निवेदन दिने सूर्य अधिकारीजीले पनि माघ २४ गतेसम्म त्यसै गर्नुभयो । पछि जिल्ला प्रशासनबाट विधान संशोधन भएर आयो । मनोनयन सहित प्रोक्सी दर्ता भयो । एउटा पक्षले मात्र होइन, दुवैले गरे । दुवैले दर्ता गराउनु भनेकोे प्रोक्सी मान्य भएरै हो । त्योबेला एउटाले मात्रै दर्ता गरेर अर्कोले गलत भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । अहिले यसैमा किचलो भयो । प्रोक्सी शब्द हटाएर भएकोलाई नै प्रमाणीकरण गरेको भए हुने । यो ठूलो विवाद थिएन । ठूलो बनाइयो । यो भोलि हाम्रै भूमिका र प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हो । यसबारे साथीहरूले सोच्नु होला । मलाई अझै पनि हामी सहमतिमा पुग्छौं भन्ने लाग्छ ।
यहाँ इपान कार्यसमितिमा आउनुभयो भने कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर सरकारसमक्ष लबिङ गर्नुहुन्छ ?
हामी सबै व्यापार गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत्मा आएका हौं । यसो हुँदा हामीले समस्याको समाधान खोज्न आन्दोलनभन्दा वार्ता रोज्नुपर्छ । वार्ताक्रममा हाम्रा समस्या सरकारसमक्ष राख्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था खराब छ । विद्युत् विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । यो ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा हाम्रा कुरा राख्न जति सजिलो थियो । संसदमा पुगिसकेपछि त्यति सहज छैन । विधेयकमा अझै केही बुँदा सच्याउनु पर्नेछ । यसमा लबिङ गर्नैपर्छ ।
अहिलेसम्म जारी भएका र अब जारी हुने अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसलाई विधेयकले उपेक्षा गरेको छ । यो माग जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने बेला छ । अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष नपुर्याइकन यो क्षेत्र बाँच्दैन । ५० वर्ष पुर्याउनुको पछाडिको तर्क के हो भने अहिले हामीसँगका आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारमा जान्छन् ।
निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना सरकारले नै सञ्चालन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कुनै सर्त राखेर चलाउन दिने त निजी क्षेत्रलाई नै हो । ३०/३५ वर्षपछि फेरि चलाउन दिनुको सट्टा अहिले नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाइदिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई घाटा हुँदैन ।
अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्ष हुँदा आयोजनाको ब्याज तिर्ने अवधि १२ वर्षबाट बढेर २५ वर्ष पुग्छ । बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । पुँजी बजारमा जलविद्युत्को सेयर मूल्य बढ्छ । लगानी जोखिम घट्छ । लगानीकर्ताले चाँडै मुनाफा पाउँछन् । अर्को, हाम्रो उठाउनैपर्ने माग बैंकको ब्याज घटाइनुपर्छ भन्ने हो । ब्याज एकल अंकमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो पटक पेनस्टक पाइपको पाताको भन्सार शुल्क १८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । पाताको शुल्क १८ प्रतिशत बृद्धि हुँदा आयोजनाको लागत ४ प्रतिशत बढ्ने रहेछ । यसबारे पहल गरेर तुरुन्तै यो निर्णयले पार्ने असरबारे लबिङ गर्न आवश्यक छ । पेनस्टक पाइपको भाउ बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गराउनुपर्छ । पहिले १ प्रतिशत थियो । अब पनि त्यही हुनुपर्छ । इपानले समयमा कार्यसमिति नपाउँदा यी विषय उठाउन ढिलो भएको सत्य हो ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्ने धेरै छन् तर इपानले साधारण सदस्य सबैलाई मतदानको अधिकार दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा इपानले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ला ?
तपाईंले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । अहिले अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सूची हेर्दा लगानी गर्ने ५ सयभन्दा बढी कम्पनी छन् । सुरुमा अग्रजहरूले स्थापना गरेको संस्था हो, इपान । पहिले कम्पनी थोरै थिए । विस्तारै बढ्दै गएको छ । सदस्यता लिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक गत माघमा भएको वार्षिक साधारणसभाले सदस्यता लिने कम्पनीको संख्या थपेर दायरा बढाएको हो । अझै पनि साढे ३ सय बढी कम्पनी इपानमा आवद्ध छैनन् । यी पनि विस्तारै इपानमा जोडिने नै छन् । अहिलेको चुनावी प्रक्रिया लम्बिएर प्रचारप्रसार धेरै भएकाले अरू कम्पनी पनि जोडिँदै जाने सम्भावना बढेको छ । जति धेरै प्रवद्र्धकहरू समेटिनुहुन्छ इपान त्यति नै बलियो हुनेछ ।
अबको इपान कार्यसमिति कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले निजी क्षेत्रलाई हजारौं मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र दियो । जसमा २८ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । केही निर्माणमा जाने क्रमका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न पालो गरेर बसेका छन् । पछिल्लो समय अनुमतिपत्र दिने तर पिपिए बन्द गर्ने परिपाटीले सरकार जलविद्युत् विकासमा बाधक बनेको देखिएको छ । यसलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि प्रमाणीत गरिसक्यो ।
विद्युत् बजारको सुनिश्चित नभएकाले पनि प्राधिकरणले पिपिए रोकेको हुनसक्छ । बजार सुनिश्चित नहुँदा भोलि आउने आयोजनाको विद्युत खरिदबापतको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने चिन्ता होला । अब निजी क्षेत्रले आफैं विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्नुपर्छ । भारत, बंगालादेश लगायत देशमा धेरै निजी कम्पनीले विद्युत व्यापारको काम गरिरहेकाले हामी पनि गर्न सक्छौं ।
निजी कम्पनीले नै प्राधिकरणले जस्तै पिपिए गरेर वितरण गर्नेबारे अब किन नसोच्ने ? म कार्यसमितिमा रहेँ भने यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर उठाउँछु । हामीले विद्युत् उत्पादन मात्र गर्ने नभई आन्तरिक तथा बाह्यै बजार खोज्ने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
यसबारे सोचिएन भने अहिलेसम्मका साझा समस्या त छँदैछन् । भोलि उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्री नहुने समस्यासमेत थपिनेछ । त्यसकारण, अब बन्ने कार्यसमितिमा हाम्रो प्यानल निर्वाचित भयो भने सरकारको मुख नताकी आन्तरिक तथा बाह्य बजारको खोजीमा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ ।